DAAWO Muuqaalo is diidan:- Yaa badbaadiyay markabkii xoolaha kaqaaday Berbera? “Somaliland oo mahadcelin diiday”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDAAWO Muuqaalo is diidan:- Yaa badbaadiyay markabkii xoolaha kaqaaday Berbera? “Somaliland oo mahadcelin diiday”.
DAAWO Muuqaalo is diidan:- Yaa badbaadiyay markabkii xoolaha kaqaaday Berbera? “Somaliland oo mahadcelin diiday”.
July 16, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 2
Maamulka somaliland ayaa warar is khilaafsan ka soo saaray cida ku guulaysatay in xayiraadii laga qaado markabkii xoolaha ka raray dekeda Berbera ee ku xayirnaa wadanka Sucuudiga.
Sidoo kale wasiir ku xigeenku waxa uu meesha ka saaray dooda soomaaliya ee sheegaysa in raysal wasaare ku xigeenku ku guulaystay inuu xayiraadii ka qaaday markabkii siday xoolaha
Wasiir ku xigeenka ayaa ku dooday sidan “Arinta raysal wasaare ku xigeenku sheegayo waxba kama jiraan waana arin been ah balse waxa arinta ka hawl galay dad badan oo tujaar ah ganacsatada somaliland ah kuwaas oo jooga dalka Sucuudiga laakiin arintaas uu sheegay raysal wasaare ku xigeenku waxba kama jiraan.” Ayuu yidhi wasiir ku xigeenka arimaha dibada soomaliland Cabdiqaadir Cumar Jaamac oo la haday Bulshotv.
Dhinaca kale golaha wasiirada somaliland oo shir deg deg ah yeeshay ayaa war ay madaxtooyadu ka soo saartay kulankooda waxay ku sheegtay in markabkii xoolaha xayiraada lagaga qaaday dedaalo ay samaysay dawlada somaliland waxaanu lagu yidhi warka “Fadhi aan caadi ahayn oo ay golaha wasiirradda Somaliland maanta yeesheen ayaa lagu lafo-guray weerarka siyaasadeed iyo dhaqaale ee maamulka muqdisho ku hayo Jamhuuriyadda Somaliland, oo ay ugu danbaysay dacwaddii iyo dagaalkii ay u galeen sidii aanay xoolaha Somaliland u dhoofi lahayn, taasoo markhaati cad u ah carqaladaynta dhaqaalaha somaliland, balse dedaal dheer oo dawladda Somaliland ka gashay sii daynta xoolahaasi ay ka degeen dalka sucuudiga.
DAAWO VIDEO:Isaaq oo Habar Habar Isku Haysta”“ Habar Jeclo Muuse Biixi Cunaha Ayey Iskaga Duubtey Waar Hargeysa Ka Baxa…” Cali Curi
Itaalka Xaar maajo waxa uu noqday.. Sucuudiga , Somaliland Xoolo ha ka iibsan… taana Ceeb & guul daro ayaa ka raacday.
Wargeysada kasoo baxa ingiriiska
oo farmaajo kutilmaamey hogaamiye kooxeed.